मोदी असार १० गते काठमाडौं आउलान् ? - Nepal News - Latest News from Nepal
२७ जेठ, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले फेरि एकपटक चर्चा पाउने भएको छ । नेपाल सरकारले आगामी असार १० गते मोदीलाई काठमाडौं निम्त्याउन लागेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिन बुधबार अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको दिल्ली भ्रमण तय भएको छ । मन्त्री महतले मोदी काठमाडौं आउने-नआउने टुंगो लगाएर फर्कनेछन् ।
भूकम्प पीडितलाई सहयोग जुटाउने उद्देश्यले नेपालले आयोजना गर्न लागेको दाता सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई अतिथिका रुपमा निम्त्याउन लागिएको हो ।
सम्मेलनमा विभिन्न ६५ वटा दातृ निकाय र मित्रराष्ट्रहरुको सहभागिता रहने नेपाल सरकारले जनाएको छ ।
नेपालमा भूकम्प जानासाथ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सहयोगका लागि तदरुकता देखाएका थिए । आगामी असार १० मा भूकम्प पीडितकै लागि सम्मेलन गर्न लागिएकाले मोदीले नेपालको निम्तो स्वीकार्ने अनुमान नेपाल सरकारको छ ।
तेस्रोपटक काठमाडौं आउन पाउन मोदीका लागि अवसरसमेत हुनेछ । नेपाल भारतवीचको सम्बन्धलाई न्यानो बनाउने अवसरका रुपमा मोदीले यसलाई उपयोग गर्ने धेरैको अनुमान छ ।
यसैवीच सार्क सम्मेलनका बेला अधुरो रहेको मोदीको जनकपुर र लुम्बिनी भ्रमण पनि यसपालि पूरा हुने सम्भावना छ ।
नेपालमा हुने दाता सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आतिथ्य ग्रहण गर्ने अवस्था आएमा यसबाट अर्को छिमेकी चीनलाई समेत नैतिक दबाव पर्नेछ ।
नेपालका लागि भने भारत र चीन दुबै देशका सरकार प्रमुखहरु दाता सम्मेलनमा आएको अवस्थामा विश्वको ध्यान तान्न सहयोग पुग्नेछ ।
भौगोलिक एवं राजनीतिक सन्तुलनको हिसाबले पनि नेपालले दुबै देशलाई महत्व दिनु जरुरी देखिन्छ । नेपाल सरकारले भारतजस्तै चीनलाई पनि दाता सम्मेलनमा उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि निम्त्याइने बताएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला दुबै देशका सरकार प्रमुखले नेपालका भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने बचनवद्धतासमेत जनाइसकेको अवस्था छ ।
बाहना मोदीलाई निम्तो, काम अर्कै
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको टोलीले भारतको तीन दिने भ्रमणका क्रममा भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीसँग केही आर्थिक मुद्दाहरुमा छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
मन्त्री महतको यो भ्रमण मोदीलाई निम्तो दिनका लागि भनिए पनि भारतीय वित्तमन्त्री जेट्लीको निम्तोमा उनी दुई सरकारी अधिकारीलाई लिएर दिल्ली गएका हुन् ।
यसअघि भारती य प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा घोषणा गरेको सहायता रकमको कार्यान्यनबारे मन्त्री महतले भारतीय अर्थमन्त्री जेट्लीसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी भारतमा नेपालीहरुको बैंक खाता सञ्चालनबारेमा छलफल हुने छ । भारु ५ सय र एक हजारका नोटसम्वन्धी विषय, भारतमा नेपाली उत्पादनहरुले ब्योहोर्दै आएको ‘काउन्टरभेलिङ ड्युटी’का साथै नेपालमा भारतको लगानी तथा दुईपक्षीय व्यापार विस्तारका बारेमा छलफल हुन अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
डा. महतले बिहीबार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटी भूकम्पपछिको नेपाल सहायता सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको तर्फबाट निमन्त्रणा हस्तान्तरण गर्ने छन् । काठमाडौंमा हुने सहायता सम्मेलनमा भारतका अन्य मन्त्रीहरुलाई पनि निमन्त्रणा गरिने छ ।
अर्थमन्त्री डा महतको भारत भ्रमणमा टोलीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्रालयका उपसचिव युगराज पाण्डे सहभागी छन् । मन्त्रीको टोली शुक्रबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।